Unyaka weeRhafu kaRhulumente waseKhanada
Uphi unyaka wezimali waseChanada?
Ukuba uke wambambisana neenkampani ezithengiswa esidlangalaleni okanye iinkampani zikaRhulumente, uyazi ukuba bahlala nekhalenda eyahlukileyo kwizinto ezinjengeemali zenyanga kunye neengxelo zebhajethi. Kwiimeko ezininzi (kodwa kungekhona konke), ikhalenda yonyaka ka-mali abayilandelayo ayilona ngoJanuwari 1 ukuya kuDisemba 31.
Ngenjongo yokugcinwa kwengxelo kunye neengxelo zemali, iinkampani kunye noorhulumente kumazwe amaninzi balandela into eyaziwa njengomnyaka wezimali.
Ukubeka nje, unyaka-mali unyaka wonyaka wezemali ngenjongo yokubhala. Ixesha leeveki ezingama-52 ezingapheli ngomhla wama-31.
Unyaka wezemali kwiinkampani ezininzi zaseMelika, ngakumbi ezo zidweliswe kwi-stock exchange exchange, ngoJulayi 1 ukuya kuJuni 30.
Ikhalenda inkampani okanye inhlangano elandelayo yintoni ebonisa ukuba iirhafu kunye neendleko zibalwa ngamagunya athengisa njengeNkonzo yangaphakathi yeNgeniso kwi-US. okanye i-Arhente yeRevenue Revenue eCanada.
Unyaka-mali we-Canada federal federal kunye noorhulumente bephondo kunye neendawo zorhulumente kwilizwe lakwa-Ephreli 1 ukuya kuMatshi 31, njengawo onke amaninzi aseBritani (kunye neBritani ngokwayo). Oku kwahluke kunomnyaka werhafu kubahlali baseCanada, nangona kunjalo, ngowona-Januwari 1 ukuya kuDisemba 31 unyaka wekhalenda. Ngoko ukuba uhlawula irhafu yengeniso yakho eCanada, uya kulandela unyaka wekhalenda.
Kukho iimeko apho ibhizinisi laseCanada lingenza isicelo sokutshintshwa kwikhalenda yonyaka wezimali. Oku kudinga isibheno esibhaliweyo kwiNkonzo yeCanada yeNgeniso, kwaye ayikwazi ukwenza kuphela ukufumana inzuzo ethile yentlawulo okanye ngenxa yezizathu zokulungelelanisa. Ukuba ufuna utshintsho kunyaka wakho wezezimali, zilungele ukuchaza isizathu sokuba ku-CRA.
Nasi umzekelo wesigqibo esinokuthi sitshintshe unyaka-mali weenkampani: Inkampani yeJoan Swimming Pool ne-Repair Company isebenza ngeenyanga ezili-12 ngaphandle konyaka, kodwa uthengisa amachibi okubhukuda ambalwa kwaye akwenza amakholi amancinci amancinci ebusika kunokuba entwasahlobo nasehlobo . KuJoe, yenza umlinganiselo wezemali ukuba asebenze kwikhalenda yonyaka wezimali ehambelana ngokuthe ngqo nomjikelezo wendalo wezoshishino.
Kukho ezinye iinjongo zezoshishino ezivakalayo zokusetyenziswa kwekhalenda yonyaka wezimali.
Izizathu zeKhalenda yeNkcazo yeMali
Kwiinkampani ezifunekayo ngokomthetho ukuba zifumane iingxelo zemali eziphicothiweyo, zingase zibe nezindleko ezininzi zokuqesha abaphicothi-zincwadi kunye nabagcini-zimali ngexesha elincinci lonyaka, xa i-preparers zerhafu zifuna imfuno ephantsi.
Akusiyo kuphela isizathu sokulandela enye ikhalenda. Kwizithili zesikolo, emva komnyaka wezemali ohambelana ngokusondeleyo nomnyaka wesikolo (ngoJulayi 1 ukuya kuJuni 30, umzekelo) wenza ingqiqo kunomnyaka wekhalenda ophela xa unyaka wesikolo ungasisiqingatha.
Amashishini athengisayo abone inkoliso yabo engenayo ifumaneka kwi-holiday gift purchases angakhetha ukubandakanya uDisemba noJanuwari kwikota enye ngenjongo yokubikwa kweengeniso, kunokuba avumele uDisemba ukuba aphumelele iziphumo zemali zonyaka.
IiNgqungquthela zaseCanada kwiNkomfa
Iingxelo zokubuyiselwa kweRhafu yiArhente yeRevenue Revenue
Ngaba ufuna ukubhala i-Essay Graduate Admissions Essay? Khangela ngaphakathi
IYunivesithi yase-Arkansas kwiAdam Rock Admissions
Yintoni uM Muhammad ayenokuyenza?
I-University ye Bellevue
I-French Preposition 'Sans': Indlela yokuSebenzisa ngayo
Ukuxhamla kweeKharityhulam kwiNkqubo
Ukusebenzisa i- 'Nada'
Izixhobo zokukhetha amagama angamaSulumane